Ozi banyere OnePlus: malite, mobiles, mgbọrọgwụ na ndị ọzọ - Androidsis | Gam akporo (Peeji nke 3)
Onye OnePlus 6 ga - egosipụta ihe mmetụta nke obi
Onye OnePlus 6 ga - enwe ihe mmetụta obi dịka Galaxy S9. Chọpụta ihe banyere njirimara ọhụrụ nke na-abịakwute ekwentị dị elu nke akara ndị China.
Offọdụ n'ime nkọwa nke OnePlus 6 kwadoro
The OnePlus 6 gbaara na TENAA: Anyị nwere nkọwa ya. Chọpụta ihe banyere njedebe dị elu nke akara ika China nke gafere na asambodo TENAA.
The OnePlus 6 ga-egosipụta obere vidiyo vidiyo
The OnePlus 6 na-aga nwere ngwa ngwa ngagharị video ndekọ. Chọpụta ihe gbasara atụmatụ ọhụrụ ekwentị dị elu ga-enwe.
Kwadoro: A ga-enye OnePlus 6 na May 17 na China
A ga-ekpughe OnePlus 6 na May 17 na China. Chọpụta ihe banyere ngosi nke ekwentị dị elu na Mee, nke ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara n'onwe ya.
Kwadoro: Onye OnePlus 6 ga-enwe iko azụ
Onye OnePlus 6 ga-enwe iko eji enyo azụ. Chọpụta ihe banyere atụmatụ dị elu nke ụlọ ọrụ siri ike nke a ga-eji iko mee.
Onye OnePlus 6 ga - abụ ihe na - enweghị mmiri dị ka vidiyo ọhụrụ
The OnePlus 6 ga-abụ mmiri na-adịghị. Chọpụta ihe banyere vidiyo nke ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya bulitela nke na-akwado na ekwentị ga-enweghị mmiri
A na-ere OnePlus 5T na Europe
OnePlus 5T dị na Europe dum. Chọpụta ihe banyere ekwentị ahụ ereworị na Europe, izu ole na ole mgbe erechara ya na United States.
OnePlus na-adọta beta OxygenOS kacha ọhụrụ maka ụdị niile akwadoro
A manyere ụmụ nwoke si OnePlus ka ha wepụ Oxygen OS niile ma ruo ugbu a ha nwere ndị ọrụ nke ngwaọrụ ndị a n'ihi oke batrị ha nyere
Nzacha ohuru nke nhazi OnePlus 6. Chọpụta ihe banyere ekwentị ndị China nke ga-ada n'ahịa n'oge na-adịghị anya na nke a na-ewepụta ihe onyonyo ọhụụ ya.
OnePlus dị ka ọ chọrọ ịrapara isi ya na mpaghara ikuku isi na ikuku ma malite OnePlus Bullet Wireless n'akụkụ OnePlus 6.
Onye OnePlus 6 ga-enye ohere iji zoo ọkwa dị na Huawei P20
Onye OnePlus 6 ga-enyekwa ohere zoo ọkwa nke ihuenyo ahụ. Chọpụta ihe banyere mkpebi ụlọ ọrụ iji mee ka ndị ọrụ zoo ọkwa ihuenyo.
OnePlus CEO kpughere ụfọdụ nkọwa nke OnePlus 6
Onye isi oche nke OnePlus na-enyekwu ozi banyere OnePlus 6. Chọpụta ihe banyere ekwentị dị elu nke ga-abịa n'oge na-adịghị anya na ahịa nke anyị maraworị ozi ndị ọzọ.
Filters ọnụahịa nke nsụgharị atọ nke OnePlus 6
Filters ọnụahịa nke nsụgharị OnePlus 6. Chọpụta ọnụahịa nke nsụgharị dị iche iche nke ekwentị dị elu site n'aka ndị na-emepụta China ga-enwe mgbe ọ kụrụ ahịa n'oge na-adịghị anya
Ihe onyonyo izizi nke OnePlus 6: Achọpụtara ọkwa ahụ
The OnePlus 6 nwere ọkwa: Foto izizi nke mbụ. Chọpụta ihe banyere ekwentị dị elu nke akara ndị China ga-amachaghị, ihe ọtụtụ ndị ọrụ tụrụ egwu.
Leaked oyiyi nke OnePlus 6 ekpughe 3.5mm Jack na USB-C
Enwere ike ịhụ OnePlus 6 na onyonyo leaked na Twitter wee kpughere ụda ọdịyo 3.5mm, njikọ USB-C na ndị ọzọ.
The OnePlus 5T na-akwụsị na-ere na United States
OnePlus 5T adịghị na ngwaahịa na United States. Chọpụta karịa banyere njedebe dị elu nke ị na-enweghị ike ịzụta na mba ahụ na nke ahụ pụtara na OnePlus 6 dị ezigbo nso.
Emechara nkọwa zuru ezu nke OnePlus 6
Leaked nkọwa nke OnePlus 6. Chọpụta ihe banyere nkọwa nke ọhụrụ elu-ọgwụgwụ ekwentị nke Chinese ika na ama na-leaked,
Igweisi ekweisi ee, ekwe ekwe ntị maka OnePlus
Enweghị isi okwu isi okwu yiri ka ọ bụ nsogbu nye ọtụtụ ndị ọrụ, opekata mpe nke ahụ bụ ihe nyocha ọhụụ OnePlus CEO gosipụtara.
Onye OnePlus 6 gosipụtara ọfụma ya na benchmark
Ihe nlere nke OnePlus 6 karia nke ya. Chọpụta karịa maka akara ekwentị nwetara na ule ndị a.
OnePlus sonyere na notch ejiji na ya ọzọ ọnụ, na OnePlus 6
Onye nrụpụta ikpeazụ nke yiri ka ọ na-e copyomi ọkwa nke iPhone X bụ OnePlus dịka onyonyo izizi nke agbapụtala nke ụdị ọzọ ya.
OnePlus chọrọ ịpịa Xiaomi mgbe ọdịda nke nyocha ahụ nke ụlọ ọrụ Asia mere iji hụ ụdị mmasị nke njedebe ya.
OnePlus na-eme uru ya okpukpu abụọ n'otu afọ
OnePlus jisiri ike mee okpukpu abụọ nke uru ya n'otu afọ. Chọpụta ihe banyere nsonaazụ nke ụlọ ọrụ na-enwe ezigbo oge.
Nweta OnePlus 5T 6GB / 64GB maka naanị € 422.99 kama € 499 na GearBest
Onye OnePlus 5T agbadata maka 15 pasent dị egwu na GearBest. Ọ bụrụ n’ịchọrọ inweta ọnụ ọgụgụ dị elu dị elu a, mee ya ngwa ngwa o kwere mee n’ihi na ọ bụ naanị maka obere oge! Anyị na-enye gị nkọwa.
OnePlus ga-eweta ekwentị ọhụrụ ya na njedebe nke nkeji nke abụọ
Ekwentị ọhụrụ OnePlus ga-abata na njedebe nke nkeji nke abụọ. Chọpụta ihe gbasara ekwentị ọhụrụ site na akara ndị China nke ga-abata na June.
Ndị a bụ ọtụtụ akwụkwọ ahụaja si ọhụrụ Star Wars nkiri: Agba nke Asatọ Ikpeazụ Jedi
Ego nanị na OnePlus 5T na Banggood. Chọpụta karịa gbasara ego a na - enweghị ego dị na OnePlus 5T ruo na Disemba 8.
E kpughere OnePlus 5T Star Wars Edition
E kpughere OnePlus 5T Star Wars Edition. Chọpụta ihe banyere ụdị a nke njedebe dị elu nke akara ndị China nke malitere na Disemba 16.
A mara ọkwa OnePlus 5T na Lava Red. Chọpụta ihe banyere ụdị ọhụụ nke OnePlus 5T na agba ọhụụ ọhụụ ọhụrụ.
Ebumnuche echiche nke OnePlus 6 na-egosi na vidiyo
Agbanyeghi na OnePlus 5T ka rutere n'ahịa ahụ, OnePlus 6 amalitela ịkọ akụkọ maka ọdịdị nke atụmatụ echiche.
Ihe mbụ beta nke gam akporo Oreo maka OnePlus 5 dị ugbu a
Ihe gam akporo OnePlus 5 nke a na-eche ogologo oge na gam akporo Oreo ka tọhapụrụ na beta maka ndị ọrụ niile nwere mmasị ịwụnye ya.
Sony XZ malitere ịnabata gam akporo Oreo
Oghere Sony XZ amalitela ịnata mmelite nke ndị ọrụ a na-eche, nke na-enye ha ohere ịnụ ụtọ gam akporo Oreo
Onye OnePlus 5 ga-enweta ihu ihu nke OnePlus 5T na mmelite n'ọdịnihu
Ozi ọma maka ndị ọrụ OnePlus 5 bụ na sistemụ ihu ihu OnePlus 5T ga-abịara onye bu ya ụzọ.
OnPlus 5T na-anwale nnwale ntachi obi kachasị ama, ọ ga-agafe ya?
OnPlus 5T na-anwale nnwale ntachi obi kachasị ama, ọ ga-agafe ya? Chọpụta ihe banyere ule ntachi obi na-aga OnePlus 5T.
Budata akwụkwọ ahụ aja nke OnePlus 5T ọhụrụ
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ibudata akwụkwọ ahụaja nke OnePlus 5T ọhụrụ ahụ, n'isiokwu a anyị hapụrụ gị njikọ iji budata ha na mkpebi 4k.
Onye OnePlus 5T bụ ọkwa gọọmentị: Mara nkọwa niile
Chọpụta ihe banyere OnePlus 5T, nke emeelarị ka ekpughere ya. Anyị amaworị nkọwa ya zuru ezu, ọnụ ahịa yana nnweta.
Nke a bụ OnePlus 5T na ndị a bụ nkọwa ikpeazụ ya
Daysbọchị 5 tupu ngosipụta nke OnePlus 5T, a ka kpochapụrụ ezigbo ihe oyiyi mbụ nke ọnụ.
Onyonyo izizi nke OnePlus 5T nke OnePlus kpughere. Akara ndị China na-ebipụta onyonyo izizi nke ọhụụ ọhụụ dị elu.
Onye OnePlus 5T nwere ike inwe igwefoto kachasị oke na ụlọ ọrụ ahụ
Nkọwapụta izizi nke mbụ nke OnePlus 5T, nke ga-abịa na 8GB nke RAM, igwefoto abụọ nwere megapixel abụọ yana ihuenyo 20: 18.
O yiri ka a ga-atụ anya na OnePlus 6 na-esote afọ ọzọ ma gosipụta ya na mmalite nke 2018. Anyị na-ekpughe nkọwa teknụzụ ọ ga-ekwe omume.
Onye OnePlus 5 ga-enwe mbipụta pụrụ iche
Onye na-eme Smartphone onye mmekọ na onye nrụpụta ejiji Jean-Charles de Castelbaja iji mepụta mbipụta ole na ole OnePlus 5
Nwere ike ịnweta 5GB OnePlus 128 na Slate Gray
Chineselọ ọrụ China na-agbasawanye katalọgụ ya site na iwebata flagship OnePlus 5 nwere ikike nke 128 GB na ngwụcha ọhụụ, Salte Gray
Android O ga-abụ mmelite ikpeazụ maka OnePlus 3
Ekwenyesiri ike na ma OnePlus 3 na OnePlus 3T ga-enweta Android O ọ bụ ezie na ọ ga-abụ mmelite ikpeazụ ikpeazụ. Ka ọ dị mma gam akporo P?
OnePlus "na-ekwuwapụta" ụdị ọhụrụ nke OnePlus 5 [emelitere]
Companylọ ọrụ China na-ekwuwapụta na profaịlụ Facebook ya ọbịbịa nke ụdị ọhụrụ nke OnePlus 5 nwere ike ịbụ agba uhie, ọla edo ma ọ bụ unicorn
OnePlus 5 na OnePlus 3T na OnePlus 3 - Isi iche
Anyị na-atụnyere nkọwa nke ihe ọhụrụ OnePlus 5 na ndị bu ya ụzọ, ndị OnePlus 3T na OnePlus 3. Don't gaghị agbaghara a obere comparative analysis.
Ihe niile banyere ihe ọhụrụ Oneplus 5: nkọwapụta nkọwa na ọnụahịa
Ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ihe ọhụrụ OnePlus 5, gụnyere nkọwapụta ya na teknụzụ ya, ọnụahịa ya na nnweta ya.
E gosipụtara mgbasa ozi TV nke mbụ maka OnePlus 5 na India
Ọhụrụ TV mgbasa ozi maka OnePlus 5 na-egosi smartphone n'ozuzu ya. Ejiri ndokwa nke OnePlus 5 maka June 20.
Weputara nkọwa teknụzụ na ọnụahịa nke OnePlus 5
Njirimara teknụzụ, ọnụahịa na ọhụụ ọhụrụ nke ọzọ OnePlus 5 na Snapdragon 835 na igwefoto azụ abụọ pụtara n'oge na-adịbeghị anya na weebụ.
Ozi ojoo! The OnePlus 2 agaghị anata mmelite na gam akporo Nougat
Companylọ ọrụ OnePlus na-akwado na OnePlus 2 agaghị enweta gam akporo Nougat, n'agbanyeghị ịbụ onye na-erughị afọ 2 ma nwee nkwa ekwupụta ya hoo haa.
Ihe izizi izizi nyere OnePlus 5
OnePlus kpebiri ibipụta onyonyo izizi nke OnePlus 5, ọkọlọtọ ọhụrụ ya nke a ga-ewepụta na June 20 ya na igwefoto abụọ na SD 835.
A ga-ere OnePlus 5 na 8GB nke RAM na June 22
Amazon India adịbeghị anya leaked nkwado oyiyi nke a OnePlus 5 nlereanya na 8GB Ram nke ga-aga-ere na June 22.
Onye OnePlus 5 ga-enwe otu atụmatụ ahụ Oppo R11
Gbaso nchapu nke foto mbụ nke OnePlus 5, ọtụtụ achọpụtawo na flagship ọhụrụ OnePlus nwere nnweta siri ike na Oppo R11.
A kwadoro OnePlus 5 maka June 20
Onye na-eme Smartphone OnePlus kwadoro mwepụta nke ama ọzọ, Onye OnePlus 5, maka June 20
Nwere ike ibudata akwụkwọ ahụ aja OnePlus 5 na akwụkwọ ahụ aja
Ndị ọchịchị OnePlus 5 na akwụkwọ ahụ aja nwere ike ibudata ugbu a n'efu ma enwere ike iji ya na ama ọ bụla.
The OnePlus 3 na OnePlus 3T ga-enweta Android O
Onye isi oche nke OnePlus gosipụtara na nso nso a na ekwentị OnePlus 3 na OnePlus 3T ga-enweta nsụgharị ọzọ nke gam akporo, akpọ Android O.
A ga-ekpughere OnePlus 5 na June 15, dị ka akwụkwọ mgbasa ozi leaked
A ga-egosiputa OnePlus 5 na June 15, dịka akwụkwọ mmado sitere na netwọkụ mmekọrịta.
OnePlus na-ebupụta usoro ntinye aka ka ị nwee ike ịchekwa mgbe ịzụrụ OnePlus 5
Ihe omuma ohuru ohuru nke OnePlus ga - enye gi ego maka ahia gi na - esote, nke zuru oke ma oburu n’inwe izu OnePlus 5.
A ga-akwụsị OnePlus 3T na June 1 na Europe
The OnePlus 3T ga-akwụsị ire ya na Europe na June 1, dị ka ụlọ ọrụ China kwadoro na post na nso nso a.
Onye OnePlus 5 ga-enwe Snapdragon 835 ma melite nkwụsịtụ aka
Ọfụfụ OnePlus na-esote, nke a na-akpọ OnePlus 5, ga-abịa n'oge okpomọkụ a na nhazi Snapdragon 835 na njigide aka kachasị emetụ.
The Oneplus 5 ga-enwe DxO na teknụzụ ya
Igwefoto agwakọtara nke Oneplus 5 ga-enwe teknụzụ DxO nke nwere ike bụrụ ọkwa dị na foto dijitalụ
Onye OnePlus 5 na-ekpochapụ Galaxy S8 na Xperia XZ Premium na Geekbench
The OnePlus 5 agabigala ule arụmọrụ Geekbench, ebe ọ karịa Galaxy S8 na Sony Xperia XZ Premium.
OnePlus kwụsịrị 3GB OnePlus 128T wee bipụta teas izizi nke OnePlus 5.
OnePlus akwụsịla ire ụdị 128GB nke OnePlus 3T, n'otu oge ahụ wepụtara teaser mbụ maka ọkwa ya ọzọ, OnePlus 5.
OnePlus 5: Ihe niile anyị maara ugbu a
Onye OnePlus 5 na-abịa n’oge adịghị anya ịsọ mpi na Galaxy S8, LG G6 na ekwentị ndị ọzọ dị elu, mana ọ ga-adị ọnụ ala ma nwee otu ọrụ ahụ.
Ọtụtụ foto ndị e kwuru na ejiri OnePlus 5 weghara
Ọtụtụ foto o doro anya na ejiri igwefoto OnePlus 5 weghaara na nso nso a na weebụ, ha na-arụtụ aka igwefoto abụọ nwere ike ịnweta na njedebe.
Foto mbu nke OnePlus 5 kwadoro nkwenye nke igwefoto abuo azu
N'ikpeazụ, a kwadoro na OnePlus 5 ga-enwe igwefoto abụọ dị n'azụ, ma e wezụga atụmatụ ndị ọzọ dịka Snapdragon 835 SoC ma ọ dịkarịa ala 6GB nke RAM.
Zụta Xiaomi Mi 6 ma ọ bụ chere OnePlus 5?
Xiaomi Mi 6 dị ugbu a na 6GB RAM, Snapdragon 835 processor, igwefoto abụọ na ọnụahịa dị ịtụnanya. Ma gịnị banyere OnePlus 5? Ọ ga-aka mma ka ọ ka njọ?
Nkọwa OnePlus 5 na-apụ apụ
Onye na-abịanụ OnePlus 5 ga-asọ mpi na Galaxy S8 na LG G6 ekele maka ntụgharị ya na nkọwapụta dị mma: Snapdragon 835, 8GB nke RAM, na ọtụtụ ndị ọzọ.
OnePlus 2 na-anata ọhụụ ọhụrụ nke OxygenOS, mana gam akporo Nougat na-eguzogide
Otu ama ama OnePlus 2 na-enweta mmelite OxygenOS nke gụnyere ndozi dị iche iche, agbanyeghị, ọ ka na-eche ọnụ na Nougat
OnePlus 5, asịrị nke ọhụụ ọhụrụ China
New asịrị banyere OnePlus 5, ọhụrụ smartphone si Chinese ike OnePlus na-achọ na-asọmpi na Samsung Galaxy S7 Edge na ga-a curved ihuenyo.
Na Jenụwarị 7, OnePlus ga-emeghe 'ahụmịhe' ụlọ ahịa mbụ ya na India
Ọ ga-abụ ụlọ ahịa 'ahụmahụ', nke mbụ maka OnePlus na India. Lọ ahịa anụ ahụ ebe ị nwere ike ịzụta ụfọdụ ọnụ ya.
Onye OnePlus 3 na 3T natara mmelite Nougat
Site na OTA, mmelite Nougat maka OnePlus 3 na OnePlus 3T kwesịrị ịbịarute ụbọchị ndị a ka ekwusachara ha.
Ọ bụrụ na ị nwere OnePlus 3, ịnwere ike ịnweta gam akporo 7.0 na beta emeghe
Ndị chọrọ ịwụnye beta nke gam akporo 7.0 Nougat na OnePlus 3 ha enweelarị ohere ịme ya.
Nke a bụ craziest unboxing ị hụtụrụla
OnePlus emeela ka ọ bụrụ ihe kacha dị egwu, na-atọ ọchị na nzuzu nke ị ga-ahụ n'oge na-adịghị anya site na OnePlus 3T iji weta ya na Europe.
OnePlus 3 na-anabata OxygenOS 3.2.8 na 1080p 60fps vidiyo vidiyo na ndị ọzọ
Na mbipụta 3.2.8 nke OxygenOS 1080 vidiyo na 60FPS ka enyerela ma tinye "bọtịnụ ụjọ" maka India.
Ahịa OnePlus 3 kwụsịrị iwu na United States na Europe
Ebe ibido OnePlus 3T, ụdị emelitere nke flagship, ụnyaahụ, enweghi ike ịzụta OnePlus 3 na weebụ.
OnePlus 3T nwere ike ịbụ ekwentị izizi nwere 8GB RAM
Na November 15, a ga-ewepụta OnePlus 3T, ekwentị nke amaara ugbu a, n'ihi asịrị, na ọ nwere ike ịnwe 8 GB nke RAM.
OnePlus 3 ga-enwe gam akporo Nougat beta ọnwa a na nke ikpeazụ na Disemba
OnePlus 3 ga-enweta ụdị beta nke gam akporo 7.0 Nougat ọnwa a, na ụdị nke ikpeazụ ya ga-abata na njedebe nke afọ.
OnePlus 3T nwere Snapdragon 821 ka ewepụtara ya na Nọvemba 15
Qualcomm si Snapdragon 821 mgbawa ga-abụ isi protagonist nke na ekwentị ọhụrụ site na ụlọ ọrụ na-akpọ OnePlus: na OnePlus 3T
OnePlus 3T nwere Snapdragon 821 mgbawa ga-abata n'oge na-adịghị anya
OnePlus ga-ewepụta mmelite ngwaike OnePlus 3 na 3T. Ọ ga-enwe mgbawa Snapdragon 821 maka ekwentị nke ga-adị ka nke mbụ.
OnePlus na-ebipụta gam akporo Marshmallow nke mbụ wuru maka OnePlus X
OnePlus X bụ ọkwa mbido nke ụlọ ọrụ a nke bipụtara ngwa ngwa mbụ maka Adroid 6.0.1, n'agbanyeghị na obodo n'onwe ya
OxygenOS 3.2.2 biara na ndozi Doze na otutu ihe maka OnePlus 3
Onye OnePlus 3 anatalarịrị OxygenOS 3.2.2 firmware melite nke na-eweta mmelite doro anya iji hie ụra na ụfọdụ ndị ọzọ.
Mgbe awa 24 nke ọrụ siri ike, anyị nọ n'ọnọdụ ịkpọsa na mmelite OTA maka OnePlus 3 na-amaliteghachi.
OnePlus 3 bụ eze ugbu a na AnTuTu
AnTuTu ebipụtala ndepụta nke smartphones 10 kachasị elu na arụmọrụ ruo etiti 2016, na OnePlus 3 bụ nke mbụ n'ime ha.
OnePlus na-akwụsị Oxygen OS 3.2.0 nwelite maka OnePlus 3
Onye OnePlus 3 anabatala mmelite Oxyen OS 3.2.0 ụbọchị abụọ gara aga ma ọ bụ ugbu a ka ọ kwụsịrị n'ihi nsogbu mgbe ị wụnye ya.
Oneplus weputara Oxygen OS 3.2.0 melite site na OTA maka OnePlus 3
Ihe ọhụrụ OxygenOS 3.2.0 melite site na OTA maka Oneplus 3 dị njikere ugbu a, OTA na-edozi nsogbu RAM ma juputa na akụkọ.
Mkpebi maka OnePlus 3 ka ọ ghara iji 6GB nke RAM bụ ka ọ ghara iji ikike batrị nke njedebe mee ihe n'ụzọ gabigara ókè.
A malitere OnePlus 3 ụnyaahụ na nyocha ọsọ ọsọ achọpụtala na ọ naghị edebe ngwa ndị ahụ nke ọma na 6GB RAM nke ọ nwere.
OnePlus emewo ka o doo anya na iji ngwa ngwa ngwa ngwa nke OnePlus 3 ị ga-eji chaja a gụnyere, ebe ọ bụ na ọ gaghị ekwe omume na onye ọzọ.
Onye isi oche, Pete Lau, egosila na ha agaghị ewepụta ihe ọ bụla ọzọ OnePlus X na ha ga-elekwasị anya na akara ọkọlọtọ ha dịka OnePlus 3.
Onye OnePlus 3 dị ugbu a maka ịzụta site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị ya maka ekwentị nwere mgbawa Snapdragon 820, 6GB nke RAM na 64GB nke ebe nchekwa dị n'ime.
Versiondị nke OnePlus 3 na 6GB nke RAM pụtara na GFXBench
The OnePlus 3 pụtara ugbu a na 6GB RAM mbipute sitere na GFXBench, ngwa ọrụ ama ama ama ama.
Ihe atụ mbụ nke foto ndị ejiri OnePlus 3 pụta
Onye isi oche nke Oneplus kesara site na otu n'ime akụkọ mmekọrịta ya na foto atọ ndị mbụ ejiri ọnụ a ga-eweta na June 14
Tọpụtara vidiyo izizi mbụ nke OnePlus 3
OnePlus 3 bụ ekwentị mbụ nke ụlọ ọrụ ahụ enwere ike zụta na-enweghị ọkpụkpọ oku site na Amazon; ugbu a abịa mbụ ya tii.
Nwere ike ịzụta OnePlus 3 na-enweghị akwụkwọ ịkpọ oku
OnePlus 3 ga-enwe mbido pụrụ iche site na eziokwu mebere ma nwee ike zụta ya site na ụbọchị mbụ na-enweghị oku.
June 15 bụ ụbọchị mbido nke OnePlus 3
Na ihe omume na China, a ga-ebido OnePlus 3 na June 15 na ngosi pụrụ iche, emere na eziokwu dị adị.
Oneplus na-ewedata ọnụahịa ekwentị ya niile
N'ịbụ onye chere mbata nke adịghị ike nke OnePlus 3, OnePlus kpebiri iji belata ọnụahịa nke OnePlus One, OnePlus 2 na OnePlus X, bụ nke ruru 30 na 50 euro obere.
OnePlus 3 na-esite na TENAA jiri 5,5 ″ FHD ihuenyo na Snapdragon 820 chip
OnePlus naanị chọrọ ịgafe TENAA iji weghachite ikpeazụ tupu ewepụta ya na mbido June.
Onye isi ụlọ ọrụ OnePlus na-ebipụta selfie nke ejiri OnePlus 3
Onye isi oche nke OnePlus chọrọ ịbanye n'ụgbọ okporo ígwè nke leaks na foto selfie nke ejiri igwefoto n'ihu nke OnePlus 3 n'onwe ya
OnePlus 3 pịa na-ese onyinyo na-ekpughe ngwaọrụ nke nnukwu ụdị na imewe
Na onyonyo a na pịa pịa anyị nwere ike ịchọta OnePlus 3 dị ka ekwentị n'ọkwa dị elu n'ihe gbasara ụdị na ụdị.
A na-enyocha ihe oyiyi abụọ nwere ike ịdị na OnePlus 3
The OnePlus 3 bụ otu n'ime ọnụ ọnụ ọnụ ala dị oke ọnụ ahịa a tụrụ anya na afọ maka mbido echere maka ọnwa June. Anyị nwere foto 2 ugbu a.
Ihe 2GB OnePlus 16 kwụsịrị na ụlọ ahịa OnePlus
OnePlus kpebiri ịkwụsị ire 2 GB OnePlus 16 na Europe, US na Great Britain n'ihi ntakịrị ọchịchọ maka ụdị a
OnePlus Otu na-enweta OxygenOS 2.1.4, anyị na-egosi gị otu esi etinye ya
OnePlus Otu nwere ike imelite ya na Oxigen 2.1.4, anyị na-egosi gị usoro niile site na usoro iji mee ya ngwa ngwa na ngwa ngwa
Otu OnePlus na-akụziri gị otu esi gbanye ngwaọrụ gị
Otu mmepe OnePlus ebipụtawo vidiyo na-egosi otu esi gbanye otu ngwaọrụ ha, ọkachasị OnePlus 2.
Otu ụdị nke OnePlus X agafeela TENAA nwere ihuenyo FHD nke 4,99-inch na Snapdragon 810.
Snapdragon 810 chip anyị nwere ike ịsị na ọ bụ kpakpando nke ụdị ọhụrụ a nke OnePlus X nke gafere TENAA taa
Etu esi melite Oneplus X na aka ma n’atufughi ikike gi
Taa, anyị na-akụziri gị otu esi emelite Oneplus X na aka ma na-efughi akwụkwọ ikike gọọmentị nke ọnụ.
OnePlus 2 Mini ga-apụta na ihuenyo 4,6-inch na Snapdragon 810 chip
The OnePlus 2 Obere bụ ihe na-esote site na ika a nke jisiri ike nweta nguzozi zuru oke iji wepụta ọdụ dị elu na ọnụahịa dị mma
OnePlus 3, ndị nsụgharị mbụ pụtara
Nsụgharị mbụ nke OnePlus 3 pụtara, ebe ị nwere ike ịhụ ọnụ nke yiri nke OnePlus 2, mana ya na ọdịiche dị iche.
[BlackFriday] Zụrụ OnePlus 2 ma ọ bụ OnePlus X na-enweghị oku
Site na mbata nke BlackFriday a ma ama, OnePlus kpebiri imeghe nzụta nke ọdụ ya na-enweghị oku.
OnePlus X Ceramic Edition, a ga-ewepụta mbipụta a kpaara na Nọvemba 24
OnePlus ga-ebupụta nsụgharị pere mpe nke obere ọnụ ya, bụ OnePlus X. Ngwaọrụ a ga-ere ahịa na Nọvemba 24.
Nwalee LG G2 VS Oneplus VS Mi4c: Trio nke aces chere ihu
Trio nke aces chere ihu na ọsọ ọsọ a Androidsis LG G2 VS Oneplus VS Mi4c
OnePlus X bụ onye ọchịchịrịrị maka etiti nke kacha mma
OnePlus ga-abịa site na Nọvemba 5 na sistemụ oku nke ga-adịgide ọnwa mbụ wee nwee ike ịzụta ya na weebụ
Nkọwa niile nke OnePlus X na-edozi otu ụbọchị mgbe o gosipụtara ya
Ruo ugbu a naanị anyị maara ọnụahịa gọọmentị ya na China, euro 240 iji gbanwee, ekele maka akwụkwọ mpịakọta. Ugbu a, usoro mmado ọhụụ na-egosi anyị njirimara teknụzụ niile nke ekwentị ọhụrụ OnePlus X. Ee e, ọ gaghị eju anyị anya.
Nlereanya ọsọ ọsọ nke Androidsis: LG G2 VS Oneplus 2
New Androidsis speed test nke anyi chere ihu LG G2 VS Oneplus 2. Onye ga-emeri agha ahụ?
Nnyocha ọsọ ọsọ nke Androidsis: Oneplus 2 VS Xiaomi Mi4c
Taa, anyị na-eche ihu Oneplus 2 VS Xiaomi Mi4c iji hụ ma enwere ụdị dị iche na iji ụbọchị gam akporo ejiri ụbọchị dị iche iche kewapụrụ site na nnukwu ọdịiche dị na ọnụahịa, ọ bụ ezie na ọ bụghị na nkọwapụta teknụzụ.
Akwụkwọ ịkpọ òkù OnePlus 2 ga-agwụ na ụbọchị 3
Ruo ugbu a, akwụkwọ ịkpọ òkù ịzụta OnePlus 2 gwụchara mgbe 24 gachara. Ugbu a, onye nrụpụta nke China kpebiri na ha ga-agwụ n'ime ụbọchị atọ.
Nnwale ọsọ ọsọ n'etiti OnePlus One na OnePlus Abụọ, ọ bara uru ihe dị iche?
Anyị na-ewetara gị nnwale ọsọ zuru oke n'etiti OnePlus One na OnePlus Abụọ ebe anyị na-egosi gị ihe dị iche na arụmọrụ nke ekwentị abụọ ahụ.
Nkọwa OnePlus X zuru ezu
Nkọwa nke ọdụdụ pere mpe nke onye nrụpụta China, Onye OnePlus X, amatago mbụ.
OnePlus na-enye gị OnePlus 2 n'ọnọdụ Samsung flagship
OnePlus nwere atụmatụ ọhụrụ iji dọta ndị ọrụ, na-enye OnePlus 2 n'ọnọdụ Samsung. Chọrọ ịmatakwu banyere nkwalite a?
Ihe niile dị njikere maka ngosi nke OnePlus X na October 29
OnePlus nwere ihe niile dị njikere iji gosipụta ekwentị ọhụrụ OnePlus X na October 29, nke a ga-eji ọdịdị ọhụụ mara mma mara.
OnePlus X, leaked oyiyi
Ngwaọrụ na-esote n'aka onye nrụpụta China bụ OnePlus X. Anyị anụla ọtụtụ ihe gbasara ngwaọrụ a ma ugbu a, anyị na-ahụ ihe oyiyi izizi mbụ.
OnePlus 2 akpọghị oku taa maka otu awa
The OnePlus 2 bụ otu n'ime ngwaọrụ ndị na-akpata ọgba aghara kachasị njọ n'afọ a. E nweela ọtụtụ okwu ...
OnePlus na-akwadebe ihe omume maka October 12, OnePlus X?
OnePlus nwere mmemme emere maka October 12 ọzọ. Na ihe omume a, onye nrụpụta China nwere ike iweta ọdụ ọhụrụ ya, bụ OnePlus X.
Asịrị nke OnePlus Obere laghachi n'ike, ihe ndị a ọ ga-abụ njirimara ọrụ ya?
A na-agbapụtalarị ụdị njirimara dị iche iche nke nwere ike ịbụ nke OnePlus Mini, ekwentị ọhụrụ nke OnePlus
OnePlus X, ga-abata na Ọktọba
OnePlus na-eme atụmatụ ịmalite ngwaọrụ ọhụrụ tupu njedebe nke afọ. Aha ya bụ OnePlus X ma ọ ga-abata n'ọnwa Ọktọba ọzọ.
Otu esi emelite Oneplus 2 ka Oxygen OS 2.1 na aka
Anyị enweelarị mmelite ọhụrụ na Oxygen OS 2.1 maka Oneplus 2, mmelite nwere mmezi dị mkpa na igwefoto, gallery na arụmọrụ arụmọrụ.
Oneplus X, nke Oneplus 2 mini ga-abata n’Ọktoba na ọ ga-efu ihe ruru Euro Euro 220
A na-enyocha ihe oyiyi ndị mbụ nke ihe nwere ike ịbụ Onye ọhụụ ọhụrụ Oneplus 2 nke ga-abata na ọnụahịa nke ihe dị ka euro 220.
Tụnyere Moto X Play VS Oneplus 2 na ọsọ ule
Nkọwa na ọsọ ọsọ Moto X Play VS Oneplus 2.
OnePlus na-akwadebe ihe dara oké ọnụ
OnePlus ewepụtala onyonyo mgbasa ozi nke ọ na-ekwupụta nnabata nke obere okomoko. Kedu nke nwere ike ịbụ?
Otu esi emelite Oneplus 2 ka Oxygen OS 2.0.2 na aka
Taa, anyị na-egosi gị otu esi emelite Oneplus 2 na Oxygen OS 2.0.2 na aka gị tupu ọkwa ọkwa nke ụdị ọhụrụ nke Oxygen Os dị.
Taa m na-akọwa otu esi edozi nsogbu Oneplus 2 melite site na OTA na-enweghị ida akwụkwọ ikike ọrụ gọọmentị.
OnePlus 2 na-enweta nkwalite OTA iji dozie Stagefright
OnePlus 2 na-enweta mmelite mbụ ya site na OTA iji dozie nnukwu oghere dị na gam akporo, Stagefright.
Nke a bụ OnePlus 2 n'ime ekele iFixit
IFixit, ụlọ ọrụ ọkachamara na ịtọpụ ekwentị mkpanaaka, ekpochapụla OnePlus ọhụrụ ahụ kpamkpam 2. Do chọrọ ịhụ ihe OnePlus 2 dị ka n'ime?
Nwere ike ịzụta OnePlus 2 na-enweghị akwụkwọ ịkpọ oku
Buchọrọ ịzụta OnePlus 2 na-enweghị akwụkwọ ịkpọ oku? Everzụta ugbua nwere ya na ngwaahịa maka mbupu ozugbo na ụgwọ mbupu gụnyere yana na ọnụahịa karịa asọmpi.
Atụmatụ ire ere ọhụụ: OnePlus 2 maka ịgba mbọ na Ebay maka ọrụ ebere
Akwụkwọ ịkpọ oku a katọrọ OnePlus achọla ụzọ iji ree onwe ha nke ọma n'ihi mkpọmkpọ ọrụ ebere na Ebay maka OnePlus 2.
OnePlus 2 na-ere na China na naanị 1 nkeji
A na-akpọ OnePlus 2 ka ọ bụrụ otu n'ime njedebe nke afọ na China, e rere ya na naanị 1 nkeji.
OnePlus na-akwadebe smartphone nke atọ nke ga-apụta tupu njedebe nke afọ, OnePlus Mini?
Companylọ ọrụ China OnePlus nwere ama nke atọ n'aka ya site na njedebe nke afọ, ọ ga-abụ asịrị OnePlus Mini?
Ihe karịrị 750.000 abụọ maka OnePlus 2
Enwerela ihe karịrị nde 750.000 maka OnePlus 2, ekwentị nke nwere ike ịkarị ihe ịga nke ọma nke ụdị OnePlus mbụ.
Etu ị ga-esi nweta akwụkwọ ịkpọ oku iji zụta OnePlus 2
Anyị na-egosi gị otu esi enweta akwụkwọ ịkpọ oku ka ịzụrụ OnePlus 2 na Ọgọstụ 11 ​​mgbe ọ malitere.
OnePlus 2 bụ onye ọrụ ugbu a: 4GB RAM na 64GB nke nchekwa maka € 399 na 3GB / 16GB maka € 339
E kwupụtara ọkwa OnePlus 2 na ụdị abụọ, otu nwere 3GB RAM na 16GB nchekwa maka € 339 na nke ọzọ 4GB / 64GB maka € 399.
OnePlus 2 na-agbapu kpamkpam awa ole na ole tupu o gosi ya
The OnePlus 2 ka edozichara zuru ezu awa ole na ole tupu ngosipụta ya.
OnePlus meghere ndapụta nke akwụkwọ ịkpọ òkù iji nweta OnePlus 2
O nwere ụbọchị ole na ole fọdụrụ iji chọpụta smartphone ọzọ nke obere mmalite nke China. Ọ bụ ya mere OnePlus ji meghee ndokwa ịkpọ oku.
A na-ere otu nde 1.5 OnePlus Otu kemgbe mmalite
Na OnePlus 2 na-aga ikpughe. Izu na-abịa anyị ga-amata ihe nzuzo niile nke ọkọlọtọ ọhụrụ nke onye nrụpụta Asia.
OnePlus 2 gafere na TENNA na-akwado njirimara ọrụ ya niile
Oneplus 2 gafere na TENNA na-egosi njirimara teknụzụ niile nke ọkọlọtọ ọhụrụ nke onye nrụpụta Asia
OnePlus nwere ike ịmalite OnePlus Abụọ Obere
Otu asịrị na-abịa izu ole na ole tupu ngosipụta nke ọhụụ ọhụrụ OnePlus Two. Site na asịrị a, OnePlus Two Mini ga-abụ mmepe.
OnePlus nwere ike ịmalite ụdị atọ nke OnePlus Abụọ
OnePlus nwere ike na-eme atụmatụ iwebata ụdị atọ dị iche iche nke OnePlus Abụọ. Ihe dị iche na ha? Ebe nchekwa RAM
Oneplus 2 ga-enwe akara mkpisiaka aka
Ihe ngosi ohuru nke edeputara na-egosi na ihe ọhụrụ OnePlus 2, nke a ga-eweta na July 27, ga-etinye ihe mmetụta mkpịsị aka
Nke a nwere ike ịbụ onyonyo izizi nke OnePlus 2
Ihe onyogho bu nke nwere ike ibu onye e chere na ya bu OnePlus 2.
OnePlus 2 ga-etinye ọgbọ nke abụọ nke Snapdragon 810
OnePlus kwuputala ọkwa na onye ọzọ OnePlus 2 ga-etinye ụdị dị mma nke SoC a maara nke ọma, Snapdragon 810 v2.1.
OnePlus 11 bụ echiche na-adọrọ mmasị
Ọ bụ ezie na OnePlus 2 abịaghị, onye mmebe ahụ na-adịghị mma na-ahapụ echiche ha ka o mebie site na ịmepụta echiche mkpanaka, dị ka ọ dị na OnePlus 11
OnePlus 2 teaser na ụfọdụ nkọwa
OnePlus ebipụtala onyonyo nke akara ụgbọ mmiri ọzọ, Onye OnePlus 2.
OnePlus Otu na 249 XNUMX ebighi ebi na mmekorita ya na Dropbox
Onye mbido nke China OnePlus ekwuputala njikọ ya na Dropbox na-eji ọkwa nke ọkwa na njedebe kpakpando ya ga-efu € 249 ruo mgbe ebighị ebi.
Oge eruola, a na-ere Onye OnePlus Otu
Oge eruola ịzụta OnePlusOne dị ka ọ dị na ahịa dị oke egwu maka obere oge
The OnePlus Otu na-adaba na ọnụahịa tupu ọbịbịa nke OnePlus Abụọ
Ngwaahịa China ọhụrụ. The OnePlus One, ga-adaba na ọnụahịa tupu ọbịbịa nke OnePlus Abụọ.
Enwere ike inye OnePlus Abụọ na June 1
Ebumnuche ọzọ nke onye nrụpụta China, Onye OnePlus Abụọ, ka enwere ike igosipụta na June 1.
Enwere ike ịhapụ OnePlus Abụọ na July 16
Onye ọzọ OnePlus Abụọ nwere ike ịpụta n'oge ọnwa Julaị, ọkachasị na July 16.
OnePlus ga-emelite ya OnePlus One idozi touchscreen mbipụta
Ka anyị na-echere OnePlus Abụọ, ụlọ ọrụ ahụ kwadoro na ọ ga-edozi nsogbu ihuenyo mmetụ na OnePlus One.
OnePlus CEO kwadoro ụfọdụ atụmatụ na ọnụahịa nke OnePlus Abụọ
Onye isi nke OnePlus ekpughela ọnụahịa na ụfọdụ njirimara ọrụaka nke OnePlus Abụọ.
Cyanogen OS 12 dị maka OnePlus One [ZIP Download]
Download Cyanogen OS 12 update ZIP na gị OnePlus One ma ị ga-enwe ezigbo omume na uru nke Lollipop na ekwentị gam akporo gị.
The OnePlus Otu nwere ROM, OxygenOS, dị ugbu a
OxygenOS, ROM nke OnePlus mepụtara ma mepụtara naanị maka ngwaọrụ OnePlus One gị, dị maka nbudata ugbu a.
OnePlus na-ebipụta ozi infographic na-egosi ihe ọ rụzuru
Iji mee ka ihe ịga nke ọma nke ụlọ ọrụ ha bipụtara ihe ọmụma na-atọ ụtọ nke na-egosi ihe OnePlus rụzuru n'ime afọ 2014 gara aga
Oxygen OS, ihe ọhụrụ OnePlus nwere ROM
Oxygen OS bụ ihe ọhụrụ dị mfe, na-enweghị bloatware, na ọcha ROM maka ekwentị OnePlus na-abịa na ngwaọrụ gị ndị ọzọ.
OnePlus Otu na-enweta 5.0 gam akporo
Ọ bụ ezie na mmelite ahụ ka nwere nsogbu n'ihi na ọ bụ usoro Alfa, OnePlus One na-enweta gam akporo 5.0 na eze.
Dị na-enweghị ịkpọ oku OnePlus One 16 GB maka euro 269
Ọ bụrụ na ịchọrọ OnePlus One, ụmụ okorobịa na OnePlus ga-erere gị ya site na weebụsaịtị ha, na-enweghị akwụkwọ ịkpọ oku ma ọ bụ nkwenye: ị zụrụ ma were ya n'ụlọ.
NewPlus One melite otu ụzọ dị iche iche
CyanogenMod ewepụtala mmelite nke na-agbazi ọtụtụ njehie nke OnePlus One na-adọkpụ, mmelite a na-eweta nkwụsi ike na ekwentị.
Etu ị ga - esi mee ka iwu olu Hey Snapdragon na OnePlus One rụọ ọrụ
Mmelite kachasị ọhụrụ na OnePlus Otu wepụrụ ikike iji Hey! Snapdragon. Taa, anyị na-egosi gị otu ị ga-esi weghachite nhọrọ ahụ.
[APK] Igwefoto Cyanogen, igwefoto nke OnePlus One na Playlọ Ahịa Google
Anyị nwere igwefoto OnePlus One nke dị na ngwa ngwa gam akporo, thelọ Ahịa Google.
A na-emelite OnePlus Otu na nkwado maka usoro RAW, ihe ngwọta maka nsogbu ọtụtụ ihe na ndị ọzọ
Onye OnePlus Otu na-enweta mmelite ọhụrụ nke na-eweta ndozi dị mkpa dị ka ihe ngwọta na ihuenyo mmetụ, nkwado maka njide na ọnọdụ ROW na ndị ọzọ
[APK] OnePlus One mkpọchi ihuenyo ọ bụla gam akporo na OnePlus Lockscreen
Lee ị nwere ngwa a nke ga-agbanwe mkpọchi mkpọchi nke gam akporo anyị site na inye ya nkwado nke ihuenyo mkpọchi OnePlus One.
Onye OnePlus One nke a na-eche ogologo oge abịala. Ọnụ ọnụ nwere atụmatụ ndị dị ịtụnanya nke na-achọ ịkụda ahịa na ọnụego ya gbanwere.